नाफामा वाणिज्य बैंकभन्दा विकास बैंक अगाडि, कुन बैंकले कति कमाए ? – bampijhyala.com
Home > समाचार > वित्तिय > नाफामा वाणिज्य बैंकभन्दा विकास बैंक अगाडि, कुन बैंकले कति कमाए ?
१ मंसिर २०७७, सोमबार १३:२७ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुको नाफामा ४८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म राष्ट्रिय स्तरको मान्यताप्राप्त ७ वटा विकास बैंकहरुले अघिल्लो वर्षको ३ महिनाको तुलनामा ४८.६३ प्रतिशत नाफा वृद्धि गरेका हुन् । यो वर्ष यी ७ वटा बैंकहरुको कुल नाफा १ अर्ब २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यो नाफा ८५ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यो करिब ४१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको वृद्धि हो ।
विकास बैंकहरुमध्ये ५ वटा बैंकको नाफामा उल्लेख्य सुधार देखिँदा राम्रो बैंकको रुपमा रहेका गरिमा विकास बैंक र ज्योति विकास बैंकको नाफा भने घटेको छ । यो अवधिमा कामना सेवा बैंकले अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब १० गुणाले नाफा वृद्धि गरेर कुल नाफा २० करोड पुर्याएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो ।
त्यस्तै शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा पनि यो अवधिमा १ सय २६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष १२ करोड ७४ लाखमा सीमित रहेको नाफा चालु आर्थिक वर्षमा २८ करोड ८७ लाख पुगेको हो । यो बैंकले अघिल्लो वर्ष लुम्बिनी प्रदेशका दुई क्षेत्रीय विकास बैंकलाई आफूमा गाभेको थियो ।
महालक्ष्मी बैंकको नाफा पनि करिब ४९ प्रतिशतको वृद्धि भएर १५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ थियो ।
विकास बैंकहरुकै विरासत मानिने मुक्तिनाथ विकास बैंकले कोभिड–१९ कै महामारीकाबीच २८.५९ प्रतिशत नाफा वृद्धि गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको सो बैंकको नाफा यो वर्ष २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुग्दा नाफामा यो वृद्धि देखिएको हो ।
लुम्बिनी विकास बैंकको नाफा भने यो वर्ष सामान्य मात्रै बढेको छ । अघिल्लो वर्ष करिब ९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकको नाफा यो वर्ष ११ करोड १७ लाख पुगको हो ।
सञ्चार गृह १ मंसिर २०७७, सोमबार १३:२७
स्थानीय तहको अन्तिम बजेट आज आउँदै १ मंसिर २०७७, सोमबार १३:२७
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने १ मंसिर २०७७, सोमबार १३:२७
हजुरको आजको दिन, आज – १० आषाढ २०७८ बिहिवार को राशिफल १ मंसिर २०७७, सोमबार १३:२७
फेरी बढ्यो पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य १ मंसिर २०७७, सोमबार १३:२७